Moe Kai: March 2012
လူတယောက်ကို မြင်ရုံနဲ. အမှန်ပြောနေတဲ့ လူလား၊ ပိုပိုသာသာ ဟန်လုပ် ပြောနေတာလား ဆိုတာ လူကဲခတ်ဖို. အလွန်ခက်ခဲ တတ်ပါတယ်။ ဥပမာ ပြောပြရရင် ဒီနေ. ကျမ လုံးဝ မတူညီတဲ့ လူနာ နှစ်ယောက်တွေ.ခဲ့ပါတယ်။
တယောက်က အင်္ဂလန်ပေါက် အသက် ၂၄ နှစ် ပါကစ္စတန်မလေးပါ။ ဗိုက်နာတာကို လာပြတာတဲ့။ နာနေတာကလဲ ၆လ ကျော်ပါပြီတဲ့။ အရင်ကလဲ ဒီကိစ္စနဲပဲ ဆေးရုံတင်ရပါတယ်။ စစ်ဆေးချက်တွေ လုပ်ထားလိုက်တာကလဲ စုံစိနဖာ ပါပဲ။ CT, MRI, MRCP လုို.ခေါ်တဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် ဓါတ်မှန်တွေ အမျိုးမျိုး ရိုက်ထားတဲ့ အပြင်၊ ပါးစပ်ပေါက် စအိုပေါက်မှ ကင်မရာပါတဲ့ မှန်ပြောင်း အမျိုးမျိုး နဲ.ကြည်.လုို.၊ ဖောက်စစ်ထားတဲ့ သွေးတွေကတော့ ပြောစရာကို မလိုလောက်အောင် ဒုနဲ.ဒေး။
ဒီလောကတွင် သူရဲ ရှိတာ ယုံသလားလို. တယောက်ယောက်မှ မေးလာခဲ့လျှင် ကျမမှာ တိကျသော အဖြေ မရှိပါ။ ကိုယ်တွေ. အခြောက်ခံရဖူးလား ဆိုလျှင်တော့လဲ မသေချာပါဘူး။
ကျမ ငယ်စဉ်ကတော့ အင်မတန် အကြောက်တရား မရှိ၊ ပေါက်တတ်ကရလဲ အလွန် လုပ်တတ်ပါသည်။ အသက် ၅ နှစ်လောက် အရွယ်က ဆေးရုံဝင်း ထဲမှ နေအိမ်မှာ နေတုန်းက ငယ်သူငယ်ချင်းများနှင့် အလောင်းအစားလုပ်ပြီး ရင်ခွဲဆောင်တံခါးကို တယောက်ထဲ လူကြီးတွေ မသိရအောင် သွား ခိုးဖွင့်ခဲ့ဖူးပါသည်။ နောက်အနည်းငယ် ကြီးလာတော့၊ အသက် ၁၀နှစ်လောက် အရွယ်မှာ အရင်က “သူရဲမွေးထားပါသည်၊ သူရဲ အလွန်ခြောက်တတ်သည်” ဟု နာမည်ကြီးသော အိမ်ကြီးကို ပြောင်းရသည်။ ကျမ အိပ်ရာက နှစ်ထပ် အိမ်ကြီးရဲ. အပေါ်ထပ်မှာ၊ တယောက်ထဲ။ သူငယ်ချင်းတချို.မှ “မကြောက်ဘူးလား” ဟု ဝိုင်းမေး တာလဲ မကြာခဏ ခံခဲ့ရပါသေးသည်။ အခြောက်ခံ ခဲရဖူးလား ဆိုရင်တော့ ကြားသမျှ ချွတ်ချွတ် ချက်ချက် အသံများ အားလုံး သစ်ပင်မှ သစ်ရွက်လေတိုက်သံများ ဟုပဲ သတ်မှတ်ထားပြစ်လုိုက်သည်။ မှတ်မှတ်ရရ တနေ.မှာတော့ သူငယ်ချင်း တသိုက် အိမ်မှာ လာဆော့ကြတုန်း သူငယ်ချင်း တယောက် အိမ်သာသွားတုန်း အိမ်သာတံခါးကြီးက အုန်းခနဲ စောင့်ပိတ်သံ ကြားရသည်တဲ့။
During my night shift last night, I met this very pleasant gentleman. He was brought in by ambulance with two falls at home. When an elderly gentleman hadafall, it is always important to establish "How they fell?, either mechanical fall or there isamedical reason such as Heart attack.
Lets say his name is James.
So I started with the question, "Ok James, do you want to tell me what happened and how did you fall?"
He replied: "Oh doc, I just crashed down to the floor"
Me: "OK, Is that because you slipped on the floor or tripped over something?"
He: "No I don't think so, but I have2lovely dogs"
Me: "Ok, good, but can you tell meabit more about your fall, James?"
He: "Oh, I don't know Doctor, I think I just collapsed. You know, my dog name is Plauto and Jessie. They are two lovely terrier. They are brilliant. when I say his name .............." its go on about3-4mins, So I had to stop him and said
တနေ.က အလုပ်သွားတော့ ဆေးရုံ ဝန်ထမ်း အမျိုးသမီး တစ်ဦး၏ လာနှုတ်ဆက်တာခံရသည်။ “မနေ.က နင်ကုပေးလုိုက်တဲ့ ငါ့ဖခင်ကြီး အတွက် အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အရေးပေါ်ဌာန တခုလုံးက အရမ်း ဂရုစိုက်ပြီး ကုသပေးလိုက်တဲ့ အတွက် အလွန် ကျေးဇူးတင်တယ်” တဲ့။ ကျမ မျက်နှာ တခုလုံး ခဏတော့ ပီတိပြုံးတွေ ဝေသွားသည်ထင်ပါသည်။ ကိုယ်လဲ လူသားထဲက လူသားပေမို. ကိုယ့် ကျိုးစားအားထုတ်တာလေးတွေ အသိအမှတ်ပြု ချီးကျူးခံရရင် ဝမ်းသာမိသည်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် အပြုံးမျက်နှာ ကြာကြာ မခံခဲ့ပါ။ အဲဒီအမျိုးသမီး ဆက်ပြောလိုက်တာက “ငါ့ အဖေ ဒီနေ.မှာတော့ အခြေအနေ မကောင်းတော့ဘူး။ သူ.ရဲ.နောက်ဆုံး အချိန်ပါပဲ။ ကုသမှုတွေကို အားလုံးရပ်လိုက်ပါပြီ။” တဲ့။ ကျမ အပြုံးမျက်နှာမှ ဘယ်လို တုန်.ပြန်ရမယ်တောင် မသိတော့ပါ။
တခါကလဲ စာအုပ်ထဲ ဖတ်ဖူပါသည်။ ဂျီပီ ဆရာဝန်လေး တယောက်ကို သူ.လူနာ တယောက် ဆုံးတော့ သူမနောက်ဆုံး အချိန်မှာ ဂရုစိုက်ပေးတာကို ကျေးဇူးတင်လွန်းလို.ဆိုပြီးတော့ သူမ သေတန်းစာထဲမှ အမွေပေးခဲ့သည်တဲ့။ သူမရှိသမျှ သူမရဲ. အိမ်အပါအဝင် အားလုံးကိုပေါ့။
WHO ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေး အဖွဲ.အစည်းကြီးမှ လူတယောက် အခြေခံ ကျန်းမာရေး ကောင်ရန် အတွက် တနေ. မိနစ် ၃၀။ တပတ်မှာ ၅ ရက်၊ အားကစား လုပ်သင့်သည်ဟု ဆိုထားပါတယ်။
အားကစား လုပ်ချင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ မှာ ပြောမကုန်နို်င်ပါ။ ပုံမှန် အားကစား လုပ်ချင်းဖြင့် နှလုံးရောဂါ၊ ကင်ဆာရောဂါများ၊ သွေးတိုး၊ ဆီးချို၊ စိတ်ဓါတ်ကျချင်း တို.ကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန် အားကစား လုပ်သူသည် စိတ်တည်ငြိမ်ခြင်း ပျော်ရွှင်ပေါ့ပါး ခြင်းများကိုလဲ ခံစားနို်င်ပါတယ်။
အားကစားဟု ဆိုရာတွင် အေရိုးဗစ် ဟုခေါ်သော နှလုံး အဆုတ် ကျန်းမာရေး အားကောင်စေသော အားကစားမျိုး (Cardiovascular exercise or Aerobics) ရှိသလို ကြွက်သား အုပ်စုတခုစီ ကို အားစိုက် လုပ်ရသော လေ့ကျင့်ခန်း (Resistance and Strengthening exercise)၊ ကိုယ်ခန္တာ အဆီချပြီး ကျစ်လစ် သန်မာစေသော လေ့ကျင့်ခန်း (Conditioning exercise) ဆိုတာတွေလဲ ရှိပါတယ်။ အဆစ်တခုချင်းဆီ ကြွက်သား အုပ်စု တခု ချင်းဆီ ကို ဆွဲ.ဆန်.ပေးခြင်းအား ဖြင့်လဲ (Stretching) သူတို.ရဲ. ပြော့ပြောင်း သန်မာမှု (Flexibility) ကို အားပေးတဲ့ အပြင် သူတို.ရဲ. ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရမှုကိုလဲ ကာကွယ်နုိုင်ပါတယ်။
အင်္ဂလန်က စစ်ဆေး ဆရာဝန်လေးတွေ သူတို.ရဲ. စစ်တာဝန် မကျခင် ပုံမှန် ဆေးရုံတာဝန် ထမ်းဆောင်နေတဲ့ အချိန်တွေမှာ ကျမ သူတို.တွေနဲ. အတူတူ အလုပ်တွဲလုပ်ရပါတယ်။ သူတို.ဆီမှ တချို. အာဖဂန်နစ်စတန်တို. အီရပ်တို. တာဝန် သွားထမ်းဆောင်ပြီး ပြန်လာသူ တချို.တွေရဲ. အတွေ. အကြုံတွေ ကိုလဲ ပြန်ကြားရပါတယ်။
ဥပမာ အခုနောက်ပိုင်း ပေါ်တဲ့ သေနတ် ကျည်ဆန်တွေက လူကို ထိလိုက်ပြီ ဆိုတာနဲ. ခန္တာကိုယ်ထဲမှာ တုန်ခါမှုနဲ. မွှေနောက် သွားအောင် ပြုလုပ်ထားကြောင်း။ ဒါ့ကြောင့် ဟိုးတလောက လူနာလေး တယောက်ဆို ကျည်ဆန် ခန္တာကိုယ်ထဲ ဝင်သွားတဲ့ အပေါက်က ပေါင်ရင်းမှာ။ သူ. ဗိုက်ထဲမှာ ကျည်ဆန် မွှေနောက် ဖျက်ဆီးပြီး ကျည်ဆန် ပြန်ထွက်လာတဲ့ အပေါက်က လည်ပင်းမှာ။ ဗိုက်ဖွင့်လိုက်တော့ သူရဲ. အသဲ၊ ဘေလုံး၊ အူ၊ အဆုတ် တော်တော် များများကို ကျည်ဆံ ဖြတ်သွား သတဲ့။ ဖျက်ဆီးတာများပြီး ကုမရအောင် လုပ်ထားသော တိုးတက်လာသော လက်နက်ပညာရယ်လုို.ပဲ ပြောရမလား။
ငယ်က စာစီစာကုံးများတွင် ထဲ့ရေးခဲ့ ဘူးပါသည်။ ကျန်းမာခြင်း၏ တန်ဖိုးကို မကျန်းမာသော အခါမှ သိရသည်တဲ့။ ဒီနေ. အိပ်ယာက နိုးလာတော့ ကိုယ်က ပူနေသည်။ နေလို.က မကောင်း။ ဘာကြောင့် ဖျားရမှန်းလဲ မသိ။ ချောင်းမဆိုး၊ လည်ချောင်းမနာ၊ ဗိုက်မအောင့်၊ ဝမ်းလဲ မသွား။ အလုပ် သွားရမဲ့နေ.မို. နေမကောင်း SICK CALL လဲ မခေါ်ချင်။ ဒါနဲ. ပါရာစီတမောလေး သောက်ပြီး အဖျားကျလာတော့ အလုပ်ကို သွားလိုက်မိသည်။
အလုပ်ထဲရောက်တော့ မေ့မေ့ ပျောက်ပျောက် အလုပ်လုပ် နေရင်းမှ လူနာ အမျိုးသမီးတယောက် မရပ် မနား ပြောနေသည်များကို နားထောင်ရင်း ခေါင်းကမူးလာသည်။ ဒီလူနာက တကယ်တော့ ဘာမှ ဖြစ်တာလဲ မဟုတ်။ သူ.ကိုသူ ကိုယ်ဝန် ရှိနေသည်လို. ထင်သည်။ ဆီးထဲမှ ကိုယ်ဝန် ရှိမရှိ စမ်းသပ်တော. Negative ထွက်လာသည်။ သွေးအဖြေကလဲ (beta HCG) Negative။ ဒါပေမယ့် သူမက မကျေနပ်နိုင်သေး။ သူ.ကိုယ်သူ ကိုယ်ဝန် ရှိနေသည်ဟု တထစ်ချ ယုံကြည်သည်တဲ့။ ဆီးစစ်တာ နဲနဲ စောနေသေးတာလဲ ဖြစ်နို်င်ပါသည် ပြောတော့လဲ မရ။ ဗိုက်ကလဲ အောင့်သည်တဲ့။ ဗိုက်အောင့်ရင် ဆေးသောက်မလား ဆိုတော့ လဲ မသောက်ချင်ဘူးတဲ့။ ဒါဆိုဘာလုပ်ပေးရ မလဲဆိုတော့လဲ သူ.မှာ အဖြေမရှိ။ သူကိုယ်ဝန် ရှိနေတာပဲ ဖြစ်ရမည်ဆိုပြီး အစကနေ ချီပြီး တောက်လျှောက် မရပ်မနား နာရီဝက် လောက်ကြာအောင် တခါ စပြောပြန်သည်။
မနေ.က လူနာ တယောက် ရုတ်တရက် ဟောခန်းထဲမှာ ဟောပြော စကားပြောပြီး လဲကျ သွားတယ်တဲ့။ အဲဒီမှာ ဂျီပီ GP ဆရာဝန် လေးတယောက် ရှိနေတော. (ကံကောင်းတယ် ပြောရမလား ကံဆိုးတယ် ပြောရမလား) စပြီး ရင်ပတ် နှလုံးပေါ်ကို တက်ဖိတာတွေ (CPR) စလုပ်သတဲ့။ ဒီလိုနဲ. နှလုံးကပြန် ခုန်လာတယ် ထင်ပါတယ်။ GP လေးက အဲဒီ အမျိုးသမီးကို ထားခဲ့ပြီး ထွက်သွားသတဲ့။ ဟော ....... လူနာတင်ယဉ် (First responder and Ambulance) ရောက်တဲ့ အချိန်မှာ အမျိုးသမီးဟာ အသက်လုံးဝ မရှူ၊ နှလုံး လုံးဝ မခုန်တဲ့ အခြေအနေမှာ မို. CPR စကြရပြန်သတဲ့။ ဆေးရုံရောက် တဲ. အချိန်မှာ ဒီ အမျိုးသမီး မှာ အသက် လုံးဝ မရှိတော.ပါဘူး။ မနစ် ၄၀ တောင် ဆေးရုံမရာက်ခင်မှာ CPR လုပ်ထားပြီးသားဆိုတော. မရောက်ခင်ထဲက အသက်မပါတော့ဘူးဆိုတာ ပြောလို.ရနေသလောက်ပါပဲ။ ဒါနဲ. CPR နောက်ထပ် နာရီဝက်လောက် ကျိုးစားကြည့်ပြီး ရပ်လိုက်ရပါတော.တယ်။ မိသားစုဝင်တွေကို စိတ်မကောင်းကြောင်းပြောပေါ့။ ဒီမှာ ဒီလူနာနဲ. ပက်သက်လို. အားလုံးက မေးခွန်း တခု ထွက်လာပါတယ်။ GP လေးက ဘာကြောင့် ဒီ အတိုင်းထားခဲ့ပြီး ထွက်သွား ရတာလဲ ဆိုပြီး။ အားလုံး လိုလိုက GP ကို ဝိုင်းပြီး အပြစ်တင်ကြတော့ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်လဲ တွေးမိပါတယ်။ ငါသာ သူ.နေရာမှာ ဆိုရင် “ကျမ ဆရာဝန်ပါ ဆိုပြီး သူရဲကောင်း ထွက်လုပ်မိ မလား?” “သူရဲဘောကြောင်စွာ လူတယောက် အသက်ကို လစ်လျှူ ရှုပြီးပဲ အသားလေး လူအများနောက်မှာ ပုန်းကွယ်နေမိမလား”
နိုင်ငံ ရပ်ခြား မှာ နေနေ ကြတဲ. ရောင်းရင်း အပေါင်း အသင်းတွေတော. ဒီလို အဖြစ် မျိုးတွေ ကြုံဖူး ကြမလား မသိပါ။ ကိုယ် တနယ် ရပ်ခြားမှာ ဆိုတာကို. မေ.ရော.ပြီး မြန်မာလိုတွေ ပြောမိတာ လေ။
ကိုယ်တွေ. အဖြစ် အပျက် လေးတချို.ကို ပြန်ပြော ရရင်ဖြင်. ပထမဆုံး ကတော. လန်ဒန် ဘက်တန် ဆိုတဲ. အရပ်မှာပါ။ ရောက်ခါစ မြန်မာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ. တွဲနေပြီး စာမေးပွဲ ဖြေဖို. ပြင်နေတဲ. အချိန်။ မြန်မာလိုနေ မြန်မာလို အတူတူ စားကြဆိုတော. တခါ တလေ နို်င်ငံခြားရောက်နေပါလား ဆိုတာတောင် မေ.နေတဲ. အထိ။ ဒီလိုနဲ. တနေ. မှာ အိမ်ရှေ. ထွက်လိုက်တော. ကပလီ တယောက် အိမ်ရှေ. မှာ လှေခါးကြီးနဲ. တွေ.လိုက်တော.။ “ဘာလုပ် မလို.လဲ” လို. မေးလိုက်မိတယ်။ အိမ်လာပြင်တာ လားပေါ့။ အဲ လူက ကိုယ်.ကို အူကြောင်ကြောင် မျက်လုံးတွေနဲ. ဆက်ကြည်.နေတယ်။ အဲဒီတော. ကိုယ်က ဒီလူ ငါမေးတာ ဘာ.ကြောင်. ပြန် မဖြေရတာလဲ ပေါ.။ စိတ်လဲ နဲနဲ လေး တိုချင်သွားတယ်။ အဲဒါနဲ. ထပ်ပြီးတော. “လှေခါးနဲ. ဘာလုပ် မလို.လဲ လို.မေးနေတာ” လို. ထပ်ပြောလိုက် တယ်။ ဒီတော. မှ အဲဒီလူက "Are you speaking in your language? I don't understandaword you said" ဘာတွေ ပြောနေတာလဲ။ ဘာမှကို နားမလယ် ဘူး ဆိုတာလုိုမျိုး အင်္ဂလိပ် လိုပြော လာတော.မှ ပဲ ကိုယ်.ကိုယ်ကို သတိရပြီး ရီရ တော.တယ်။
ဆေးရုံမှာ လုပ်သော ကျမတို.အတွက် အမြဲတန်း ဆရာဝန် တယောက်နဲ. တူပြီး လူလေးစားခံရန် နေတတ်ဖို. အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ အခု ရောဂါ ကူးစက်ပိုး ပြန်.တာ လျှော.အောင်ဆိုပြီး ဂျူတီကုတ် ဖြူဖြူကြီးတွေကို ဒီ အင်္ဂလန်မှာ မဝတ်ရတော.ပါဘူး။ ဒါပေမယ်. ကျမတို.တွေဟာ တော်သင်.တဲ. အဝတ်အစား နဲ. တော်သင်.သော. ကျင်.ကြံ ပြုမူမှုများ နဲ.တော. အထူး သတိပြု နေထိုင်ရပါတယ်။ အပြင်မှာ ကဲချင်ရင် ကဲကြပေမယ်. အားလုံးဟာ ဆေးရုံမှာတော. အိငြေ်္ဒလေးနဲ. နေကြရပါတယ်။ မနေ လို.လဲ မရဘူးလေ။ အတိုင်ခံရရင် ခေါ်ပြောခံရမှာကိုး။
အဲဒီလို အများစုက ဆရာဝန် ဆိုတဲ. ကျင်.ဝတ်နဲ. နေပေမယ်. အလွန်ကိုပြောင်တတ် သောသူငယ်ချင်း တချို.လဲ ရှိပါတယ်။ တယောက်ကဆို အေပရယ်ဖူး (April Fool) မှာ ရောဂါကြောင်. ခြေထောက် တဖက် ဖြတ်လိုက်ရတဲ. လူနာတယောက်ဆီ သွားပြီး၊ လူနာရဲ. မေ.ဆေး မပြေတပြေ အချိန်မှာ “အဘရယ် ကျွန်တော်တော. ပြောရမှာ တော်တော် စိတ်မကောင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို.တွေ အဘခြေထောက်ကို ဘယ် နဲ. ညာ မှားပြီး ဖြတ်လိုက်မိလို.” ဆိုပြီး သွားနောက်တာ။ ကံကောင်းတယ် ဟိုအဘမှာ ပြန်ပြီး မေ.လဲ သွားတော. မလို.။
ငယ်စဉ်က လူတယောက် သေတယ်ဆိုတာ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ ခဏခဏ ကြည့်ဘူးပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်တဲ့သူက ပြောစရာရှိတာတွေ အရှေကြီး ပြော၊ မှာစရာရှိတာတွေ တယောက်ချင်းဆီမှာ။ ပြီးရင် ခေါင်းကလေးစောင်းကျ ဒါမှမဟုတ် လက်ကလေး ပြုတ်ကျ။ ဟော အဲဒီမှာ ဆရာဝန်က ဝင်လာ။ နားကျပ် ကလေးတချက်ထောက်။ ပြီးတော. ခေါင်းလေးခါပြ။ ဘေးဝိုင်းနေတဲ့ ဇာတ်ရံတွေ က ငိုချင်းချ ပေါ့နော်။
အဲ တကယ်. လက်တွေ. မှာတော. လူနာ တယောက် ဆုံးပါးသွားတာ အဲဒီလောက် မရိုးရှင်းပါဘူး။ ဆေးရုံမှာ လုပ်တဲ့သူဆိုတော့လဲ အိုနာသေ ဆိုတာတွေဟာ နေ့စဉ်နှင့် အမျှကြုံတွေ.နေရတာ သံဝေဂ ရစရာရယ်ပါ။ ဒီနေ. သူငယ်ချင်း ဆရာဝန်လေး တယောက်ရဲ. အဖြစ်ကိုကြည်.ပြီး ဒီအကြောင်းတွေ ရေးဖြစ်သွားရတာပါ။
ဒီနေ. ဆေးရုံ အရေးပေါ် ဌာနကို အသက် ၉၀ ကျော် လူနာတယောက် ရောက်လာတယ်လေ။ နှစ်လုံးအားနဲပြီး ကျောက်ကပ်လဲ အလုပ်ကောင်းကောင်း မလုပ်တော.ပါဘူး။ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော. အသက် မျော.မျော.ပဲ ရှိပါတော့တယ်။ အားလုံးသဘောတူညီ မှုနဲ. ဆေးကုသတာတွေကို ရပ်ပြီး လက့်ရှော့ထားတဲ့ အခြေအနေကို ရောက်နေပြီပေါ့။ မိသားစုဝင်တွေကလဲ ၅ ယောက်လောက်ရှိတယ်။
အားကစားပွဲ မြောက်များစွာကို အလုပ်အနေနဲ. ကျမ မကြာခဏ သွားရပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ ပွဲတွေဆိုရင် ထုံးစံအတိုင်း နိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု အလံတွေနဲ. ဘယ်နိုင်ငံက ယှဉ်ပြိုင်နေတယ် ဆိုတာပြပါတယ်။ အလံပေါင်း မြောက်များစွာမှာမှ ၃ ရောင်အလံတွေက များလွန်းတော. ဘယ်လောက်ပဲ ကျိုးစားမှတ်ပေမယ့် ဘယ်နို်င်ငံရဲ. အလံဆိုတာ မှတ်မိဖို. တော်တော် ခက်ပါတယ်။ ဒီကမ္ဘာမှာ အကြမ်းမျဉ်း နိုင်ငံပေါင်း ၁၉၆ နိုင်ငံနဲ. စုစုပေါင်း အလံ (နိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု)၂၅၇ ရှိတယ်လို. ဝီကီပီဒီယား (Wikipidia) မှာ ဆိုထားပါတယ်။ ဒါတောင် တချို.က ကိုလိုနီနိုင်ငံ။ တချို.အလံက နိုင်ငံကိုယ်စားပြု မဟုတ်တာတွေ မြောက်မြားစွာ ရှိတာကြောင့် ဒီနံပါတ်တွေ က ကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒန်း (UK) မှာတောင် နိုင်ငံကိုယ်စားပြု ယူနီယံဂျက် အလံရှိသလို၊ အင်္ဂလန်၊ ဝေလ၊ စကော့တလန်၊ အိုင်ယာလန် ဆိုပြီး သီးခြား အလံတွေ ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒီအလံ ၂၅၀ကျော်လောက် မှာမှ ၁၀၀ လောက်က ၃ရောင် အလံတဲ့။
သြော် ကိုယ့်နိုင်ငံ အလံက ကြယ်ဖြူ ၁၄လုံးနဲ. အနီရောင် အလံ။ သူများနဲ. ကွဲကွဲ ပြားပြား ရှိတယ်လို. ဆိုကာမှ ခုတော့ ကိုယ်လဲသူတို.နဲ. ရောရော ရောင်ရောင် ၃ရောင် အလံ ဂိုဏ်းဝင် ဖြစ်သွားပြီတဲ့။
WHO announced that Childhood obesity has become the most serious health risk in 21st century. The percentage of obese and overweight children has more than tripled in the last 20 years.
Asadoctor, from public health point of view, we become responsible to discuss and encourage parents to help losing their children's weight if they are overweight. We explain parents how children should be encouraged to be more active and should have less time on using computer and internet, watching television or playing computer games. They are also referred to Dietician who will help with "diet and nutrition". Sometimes, it makes me think as to why I even need to discuss all about these. Children, by nature, love playing. When we were young, we finished our school at 4pm and we played in the playground with other friends the whole afternoon until it became dark. We did not have 24 hours Television or internet then. We were happy and healthy.
ကျမ လက်ထပ်ပြီး ရောင်နောက်စထုံးပါ လင်တော်မောင်နောက် လိုက်လာတော.မယ် ဆိုတော. အလွန်အေးတဲ. ဒီဇင်ဘာ ၃၁ရက်နေ.ကပါ။ လာမယ်ဆိုပြင်ဆင်တော. လုပ်ရတဲ. ပြင်ရဆင်ရတဲ. ဟာတွေကတော. မပြီးနိုင် မဆီးနိုင်ရယ်ပါ။ လက်ဆောင် ထဲ.ပေးချင်တဲ. အသိရဲ. ပစည်း တချို.ကို သယ်ပေးရ သလို၊ ကိုယ် ကိုယ်တိုင်လဲ တော်တော်နဲ. ပြန်နိုင်မှာ မဟုတ်တာကို သိနေတဲ. အတွက်. ပစ္စည်းတော်တော် များများ ကို နိုင်သလောက် သယ်ရပါတယ်။ စာအုပ်တွေ အများစုကို စာတိုက်မှပို.ပေမယ်. တချို.ကုိုတော. ရောက်ရောက် ချင်းစာမေးပွဲ ဖြေရဦးမှာ ဆိုတော. ကိုယ်နဲ. သယ်ရပြန်ပါတယ်။ ဒါတောင် ကိုယ် ငယ်ကသံယောစဉ် သိပ်ကြီးခဲ.တဲ. ပစ္စည်းတော်တော် များများကို သံယောစဉ် ဖြတ်ပြီး ထားခဲ.တာပါ။ အဲဒါလဲ အလေးချိန်က အရမ်းကို ပိုနေသေးတဲ. အတွက်. ပြန်ထုပ်လိုက်၊ ပြန်ထဲ.ကြည်.လိုက်နဲ. တော်တော. ကို အ လုပ်ရှုပ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လဲ နိုင်ငံခြား အရင်က သွားဖူးတာမဟုတ်တော. ရင်ကတော. ခပ်တုန်တုန်ရယ်ပေါ.။ ပြောစရာကိုမလို မြန်မာ အစားအစာ အမြောက် အများကလဲ ယူလာသေးတာဆိုတော.၊ သူတို.က အနံ.ထွက်ရင် အင်္ဂလန် လေဆိပ်မှာ အဖမ်းခံ ရဦးမှာဆိုတော.။